Ra’iisul wasaarihii dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab oo Urdun U goostay
Syria:-Raisulwasaarihii dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab ayaa u goostay maanta dalka Urdun ka dib markii uu si dhuumaalisi ah uga baxsaday dowlada Suuriya waxaana socdaalkiisa ku weheliya Masuuliin ka tirsan wasaaradaha Batroolka iyo cimilada.
Raisulwasaarihii dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab ayaa waxaa kale oo baxsadkiisa ku weheliya 10 ka mid ah qaraabadiisa ;Mr Xijaab ayaa waxaa xilka Raisulwasaare u magacaabay Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar Asad. Ciidamada Dowlada dalka suuriya ayaa shalay ilaa saaka waxay baadigoob ugu jirtay in ay helaan Raisulwasaarihii dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab balse kuma aysan guuleysan waxayna ciidamada aad uga raadiyeen deegaanka uu ka soo jeedo Dayr Zuur.
Taleefishinka xukuumada Suuriya ayaa waxaa laga sii daayey warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar Asada kaas oo xilka looga qaaday Raisulwasaarihii dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab . Afhayeen u hadlay Raisulwasaarihii hore ee dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab ee u baxsaday dalka Urdun oo la yiraahdo magaciisa Maxamed Cadhri ayaa xaqiijiyey in Raisulwasaarihii Suuriya uu joogo Urdun uuna ku biiray kooxaha kacdoonka ka wada Suuriya .
Maxamed Cadhri ayaa sidoo kale sheegay in Raisulwasaarihii dalka Suuriya Riyaad Cabdi Ra,uuf Xijaab uu la hadli doono dhawaan saxaafada uuna ka warami doono sababihii ku kalifay in uu ka goosto dowlada Suuriya ee uu madaxa ka yahay Bashaar Asad.